Muummicha Ministeeraa Abiyyi Ahimad Maatiiwwan Namni Duraa Du’an Jajjabeessan
Haleellaa boombii waltajjii Masqalaatii raawwatameen namoonni lubbuun isaanii darbe lamaan eenyummaan isaanii ifa ta’ee jira.
Walayitaa Sooddoo irraa Yooseef Ayyaalew fi Wallaggaa irraa Gusaa Gaaddisaa ti halellaa kanaan kan lubbuun isaanii darbe.
Muummichi ministeeraa Dr. Abiyi Ahimed maatii namoota kanaa bilbiluufii dhaan jajjabeessaniiru. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee kanneen miidhaan irra ga’e gargaaruuf sagantaa maallaqa walitti qabuu ifa godhee jira.
Lammiiwwan kutaalee biyyattii adda addaa keessa jiraatan deggersa muummicha ministeerichaaf qaban akkasumas haleellaa boombii sanaan aarii itti dhaga’ame ibsuu itti fufanii jiru.
Itti gaafatamaan waajjira muummicha ministeeraa obbo Fitsuum Araggaa ergaa twitter maxxansaniin akka ibsanitti haleellaa boombii kanaan kanneen lubbuun isaanii darbe dargaggoo Yoseef Ayyaaleew fi dargaggoo Gusaa Gaaddisaa jedhamu.
Kan umuriin waggaa 28 Yooseef Ayyaalew Walaayittaa irraa yoo ta’u kan umuriin waggaa 25 Gusaa Gaaddisaa immoo Walagga Gimbii irraa ta’uun beekameera.
Muummichi ministeeraa Dr. Abiy bilbiluu dhaa kan isaan jajjabeessanis maatiiwwan dargaggoota kana lamaanii ta’uu obbi Fitsum tuqaniiru.
Bulchiinsi Finfinnee gama isaan haleellaa boombii kanaan lammiiwwan miidhamaniif deggersa kan ta’u qarshii miliyoona 10 ramaduu isaa kantiibaan magaalattii Dirribaa Kumaa ibsaniiru. Galii itti dabalaa walitti qabuuf illee koreen hundaa’uu isaa ibsanii jiran.